Ọtụtụ ụgbọ elu na -aga London, Kyiv na Istanbul na Air Astana ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ọtụtụ ụgbọ elu na -aga London, Kyiv na Istanbul na Air Astana ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Kazakhstan na -agbasa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Turkey na -agbasa News • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ na -agbasa Ukraine • Akụkọ dị iche iche
Air Astana na -ekwupụta mmụba ugboro ugboro na Ukraine na Turkey, maliteghachi ụgbọ elu London.
Air Astana na -abawanye ugboro ugboro Istanbul.
Air Astana na -agbakwụnye ụgbọ elu Kyiv ọzọ.
Air Astana maliteghachiri ụgbọ elu London kpọmkwem site na Nur-Sultan.
Air Astana webatara ugboro ugboro n'etiti Kyiv na Nur-Sultan na Tuesday, Septemba 7, 2021, na isi obodo Kazakhstan na Ukraine jikọtara ugbu a ugboro atọ n'izu na Mọnde. Tuesday na Tọzdee. Ụgbọ elu ahụ na -arụkwa ụgbọ elu n'etiti Kyiv na Almaty na Wednesde, Satọde na Sọnde.
Air Astana ga -amalitekwa ugboro atọ n'etiti Istanbul na Almaty na 17, Septemba 2021, nwere ụgbọ elu na Tuesday, Fraịde na Sọnde, yana ọrụ dị n'etiti Istanbul na Nur-Sultan na Tọzdee.
Ikuku Astana na-ebidokwa ụgbọ elu si London na Nur-Sultan ugboro abụọ n'izu na Wednesde na Satọde malite na Septemba 18, 2021.
A na -eji obiọma rịọ ndị njem ka ha soro ihe ntinye chọrọ tupu ụgbọ elu nke Air Astana website.
Air Astana bụ ọkọlọtọ ụgbọelu nke Kazakhstan, dabere na Almaty. Ọ na-arụ ọrụ ndokwa, ọrụ ụlọ na nke mba ụwa na ụzọ 64 si isi isi ya, Almaty International Airport, na site na isi ya, Nursultan Nazarbayev International Airport.